Fedora na-ewebata Kinoite a Counterpart nke Silverblue na atụmatụ Migra FreeType na HarfBuzz | Site na Linux
Emepụtara ndị mmepe Fedora na nso nso a webatara mbipụta ohuru nke Fedora, akpọrọ «Kinoite» nke dabere na teknụzụ Fedora Silverblue, mana iji KDE kama GNOME dika desktọọpụ.
Ekebeghi ihe oyiyi Fedora Kinoite monolithic n'ime ngwungwu di iche, ejiri emelitere ya ma wuo ya n'aka ndi Fedora RPM site na iji rpm-ostree toolkit.
1 Banyere Fedora Kinoite
1.1 Fedora 34 na-eme atụmatụ ịkwaga FreeType na HarfBuzz iji meziwanye ihe ngosi
Banyere Fedora Kinoite
Nke a wepụtara ọhụrụ Fedora Kinoite na-anọchi anya iji gosipụta gburugburu ebe obibi (/ na / usr) arụnyere dị ka naanị-agụ.
A na-achọta data dị maka mgbanwe na ndekọ ndekọ / var (tinyere / wdg bụ kere dị ka ihe atụ njikọ na / var / wdg, / ụlọ dị ka njikọ na / var ụlọ, na / ịpụ dịka njikọ na / var / opt)
Ka ịwụnye ma melite mgbakwunye ngwa, a na-eji usoro ngwugwu flatpak nke nwere onwe ya, nke a na-ewepu ngwa site na isi usoro ma na-agba ọsọ na akpa dị iche, tinyere ngwa ndị ọzọ enwere ike ịwụnye site na Flathub, mana ọrụ na-aga n'ihu ịmepụta nchịkọta Flatpak maka Fedora na ngwa KDE.
Ihe oru ngo a anatabeghi onodu nke nyochaghari Fedora ọ dịkwa n’usoro mmepe.
Ọ na-kwuru na ọ na-zubere na edepụtara nke mbụ site na oge Fedora 35, ma ụdị ikpe ahụ adịlarị maka nyocha.
Onwebeghi onodu eji ihe eji eme ihe, ma tinye Fedora Kinoite, a na-atunye ya ka o tinye Fedora Silverblue nke mbu wee jiri KDE dochie desktọọpụ site na ịgbaso iwu ndị a:
Iji melite usoro ntọala na ngwugwu flatpak, ịkwesịrị ịgba ọsọ iwu (enweghị eserese eserese iji melite):
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya banyere Fedora Kinoite ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Fedora 34 na-eme atụmatụ ịkwaga FreeType na HarfBuzz iji meziwanye ihe ngosi
Ọzọkwa, ndị mmepe Fedora kwukwara nke ahụ a FreeType engine ga-emejuputa maka Fedora 34 mbipute Fedora 34 haziri mkpụrụedemede mbufe iji glyphs Nchọpụta Ngwa HarfBuzz.
A na-enye ngwugwu freetype-harfbuzz maka ule na Fedora Rawhide. Enyochabeghị mgbanwe a site na Fedora Engineering Steering Committee (FESCo), nke na-ahụ maka mmepe teknụzụ nke nkesa Fedora.
Otú ọ dị, iji HarfBuzz na FreeType ka ekwesịrị ịkwalite ogo ntụnye (na-eme ka ihe ngosipụta nke glyph dị mma mgbe a na-emezi ya iji melite ọgụgụ isi na ntanetị dị ala) mgbe ị na-egosipụta ederede n'asụsụ nwere nhazi ederede dị mgbagwoju anya, nke enwere ike imepụta glyphs site na otutu ihe odide.
Karịsịa, iji HarfBuzz ga-ewepụ nsogbu nke ileghara mgbe ị na-atụgharị uche na njikọ nke enweghị mkpụrụedemede Unicode dị iche iche maka ya. Dị ka ihe ncheta, ntụgharị afọ gara aga nke ọba akwụkwọ Pango iji HarfBuzz butere nsogbu igosipụta mkpụrụ edemede ochie.
Ọzọkwa, Rịba ama ihu ọma nke Kọmitii FESCo maka mbipụta Fedora niile iji usoro systemd-oomd maka nzaghachi oge na-adịghị na ebe nchekwa na sistemụ kama nke usoro earlyoom a na-ejibu.
Systemd-oomd dabere na PSI kernel subsystem (Pressure Stall Information), nke na-enye ohere onye ọrụ iji nyochaa ozi gbasara oge ichere iji nweta ihe dị iche iche (CPU, ebe nchekwa, I / O) iji nyochaa ogo nke usoro eji eme ihe na ụdị nwayọ.
PSI na - eme ka ọ kwe omume ịchọpụta oge igbu oge n'ihi enweghị akụrụngwa yana iji kpochapu ọrụ nke usoro kpụ ọkụ n'ọnụ na ọkwa ebe usoro ahụ na-adịchaghị oke egwu ma ọ baghị amalite iwepụ ihe nzuzo ma ọ bụ zipu. data na nkewa gbanwere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Fedora na-ewebata Kinoite onye ibe ya Silverblue ma na-ezube ịkwaga FreeType na HarfBuzz
Elasticsearch na-akwaga na ikikere SSPL na-anaghị akwụ ụgwọ